Izindaba - Ukuthuthukiswa Kwesikhathi Esizayo Kwamadivayisi Wezokwelapha
Ngomkhuba wamanje osheshayo wemishini yezokwelapha, imboni yemishini yezokwelapha idinga ukuklama ngokubheka kokuzenzela, ubuhlakani nokuhamba. Ngakolunye uhlangothi, le mibono ingakhuthaza izidingo zentuthuko yomphakathi. Ngakolunye uhlangothi, la maphuzu amathathu azoba ngukhiye wentuthuko yangomuso. Ngakho-ke uyini umkhombandlela wokuthuthuka wesikhathi esizayo wedivayisi yezokwelapha yokwakhiwa kwezimboni? Ngokuzayo, ukwakheka komkhakha wedivayisi yezokwelapha kuzokwenziwa kube ngokwakho futhi kube yiselula. Ukuthuthukiswa komklamo wezimboni wemishini yezokwelapha ehlakaniphile kukhuthaze ijubane lemithi yolwazi. Nge-Intanethi, ukuxhumana okusebenzisanayo phakathi kweziguli, abasebenzi bezokwelapha, imishini yezokwelapha, izikhungo zezokwelapha, kanye nokwakhiwa kohlelo lokunakekelwa kwezempilo olunesiguli.
Inhloso ukuhlinzeka ngemisebenzi yezokwelapha ngezindlela ezihlakaniphile nezinethiwekhi ezizungeze iziguli, ukuze kutholakale intuthuko ehambisanayo ezicini ezintathu zezindleko zensizakalo, ikhwalithi yesevisi namandla ezinsizakalo.
Njengomklami, kufanele enze ukucabanga kwakhe nokuphendula kwakhe ezindabeni zenhlalo nasezimfunweni zomkhiqizo. Cabanga ukuthi ukwenziwa kwamadivayisi wezokwelapha ahlakaniphile kufanele kwenziwe kanjani eminyakeni yolwazi; cabanga ukuthi ungenza kanjani iziguli zizwe ukwenza okwabantu nokwenziwa okuhlukahlukene kwemikhiqizo okulethwa yintuthuko yezobuchwepheshe; vumela iziguli ukuthi zisebenzise amadivayisi wezokwelapha ukuzihlola nokululama ekhaya, Zithokozise ngosizo olungaphezulu kosizo lwesibhedlela, futhi ngosizo lokuqapha ibanga elide, ungaqedela ukuhlolwa kwangaphambi kokuthola usizo lwezempilo, ukuvimbela, ukubheka kanye nempendulo yangemva kokugula, ukululama , nezindlela zokunakekelwa kwezempilo.
Ngakho-ke, ukwakheka kokuhlanganiswa kohlelo oluhlakaniphile, olwenziwe ngezifiso, nolunezinhlobonhlobo zokwakhiwa kwezimboni kwamadivayisi wezokwelapha ahlakaniphile kuzoba yindawo entsha yokuheha yokwanelisa iningi lemindeni. Kusho nokuthi kuzophakanyiswa ukwakheka okusha kokusetshenziswa kokuklanywa kwezimboni nezindlela zokusebenzisa zamadivayisi ezokwelapha ahlakaniphile. Izidingo zokuklama eziphakeme.
I-Smart medical ukusetshenziswa kwamakhono we-Intanethi Wezinto emkhakheni wezokwelapha, futhi ukwabiwa kwezinsizakusebenza zezokwelapha kuqedwa ngokusebenzisa ubuchwephesha bokubona ngamehlo. Iqhutshwa izinguquko ezintsha zezokwelapha, izwe lami libheka kakhulu ukutshalwa kwezimali emkhakheni wezokunakekelwa kwezempilo nezempilo zomphakathi ekwakhiweni kwezimboni kwamadivayisi wezokwelapha ahlakaniphile nolwazi lwezokwelapha.
Ngokuzayo, ukwakhiwa kwezimboni kwemishini yezokwelapha ehlakaniphile kuzobonisa ukuthambekela okunamandla kokwenza ngezifiso nokuhamba.